Obodo dijitalụ - otu anyị nwere ike isi nweta teknụzụ dị ka ihe SIEMENS na-enye - Geofumadas
Obodo dijitalụ - otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ dị iche iche dịka ihe SIEMENS na-enye
Machị, 2020 Engineering, innovations
Ajụjụ ọnụ Geofumadas na Singapore ya na Eric Chong, Onye isi ala na onye isi, Siemens Ltd.
Kedu ka Siemens si eme ka ọ dịrị ụwa mfe ịnweta obodo ukwu mara ama? Kedu onyinye gị bụ isi nke ga-ekwe nke a?
Obodo na-eche ihe ịma aka ihu n'ihi mgbanwe nke megatrends nke obodo mepere, mgbanwe ihu igwe, ijikọ ụwa ọnụ na ngosipụta ihe. N'ihe siri ike ha niile, ha na emeputa otutu data di iche-iche nke ise digitization nwere ike iji nweta ozi ma kwalite sistemu na-akwado akụrụngwa obodo.
Na Siemens, anyị leverage MindSphere, sistemu IoT igwe ojii mepere emepe iji mee ka 'obodo a mara mma'. E dere Mindsphere “Kasị Mma na Klaasị” maka IoT site na PAC. Site na iji Open Platform-as-a-service, ọ na - enyere ndị ọkachamara aka ijikọ usoro amamịghe obodo. Site na ike MindConnect ya, ọ na-eme ka njikọ siri ike nke Siemens na ngwaahịa na akụrụngwa weghachite ezigbo oge maka nyocha data buru ibu na-enyere ngwa Smart Cities dị iche iche aka. Ihe omuma a na anakọtara n’obodo n’ozuzu ya nwekwara ike ibu echiche maka ndi n’eto obodo na ndi n’eto amuma iji gosiputa mmepe obodo n’iru obodo. Site na mmepe na-aga n'ihu na ọgụgụ isi mmadụ na nyocha data, usoro nke ịmegharị data n'ime nghọta na imepụta echiche ọhụụ maka ngwa obodo nwere ọgụgụ isi nwere ike inye aka dozie nsogbu ndị mepere emepe nke megatrend na-eme ma nwekwuo ike na teknụzụ ga-aga n'ihu. obodo mara mma.
Ndi obodo ana enwekwu amamihe na ike ha chọrọ? Kedu ka ị si ahụ ọganihu? Kedu otu ụlọ ọrụ dị ka Siemens nwere ike isi nye aka mee ka ije ya dị ọkụ?
Iswa na-amarawanye na mmepe nke obodo ndị nwere amamihe. Ndi nwere ikike dị ka gọọmentị, ndị na-eweta akụrụngwa, ndị isi ụlọ ọrụ, na-eme ihe na-aga n'ihu ịkwalite mgbanwe. Na Hong Kong, gọọmentị weputara ọmarịcha Smart City Blueprint na 2017, nke debere ọhụụ maka mmepe nke Smart City anyị na Blueprint 2.0 n'ụzọ. Na mgbakwunye na itinye ụkpụrụ doro anya maka ụlọ ọrụ ahụ, gọọmentị na-enyekwa nkwado ego dị ka ego na ibelata ụtụ isi iji kwado mmepe na mgbasa nke ihe dị ọhụrụ na isiokwu a na-eto ngwa ngwa. Nke kachasị mkpa, ọ na-ebute ụzọ site na atumatu obodo ndị amamihe dị ka Energizing Kowloon East, ebe a na-eduzi echiche nke echiche. Obi dị anyị ezigbo ụtọ inye aka na ahụmịhe anyị na PoC dịka, dịka ọmụmaatụ:
Sistemụ Nyocha Kerbside / Nbudata - Ihe ohuru iji bulie oghere gutter dị mkpa ma nyere ndị ọrụ aka ịbanye na nbudata / nbudata dị na AI.
Sistemụ Ntanetị Agbara ike - Installwụnye ihe nnabata igwe eletrik ụlọ maka data ọkụ eletrik na-eji ya, ka ndị ọrụ wee soro usoro eji arụ ọrụ iji meziwanye usoro oriri ọkụ.
Na mgbakwunye na iweta ahụmịhe anyị zuru ụwa ọnụ, anyị kwenyere na anyị nwekwara ike inye aka mee ka ihe dị mma na gburugburu obibi na-aga nke ọma. Maka ebumnuche a, anyị tinyere ego na Smart City Digital Hub na Science Park iji nye usoro maka mbido, ndị ọkachamara na teknụzụ, na ndị na-eweta akụrụngwa iji wuo Pọtụfoliyo Dijitalụ ma mepụta ngwa obodo.
Mgbalị anyị na Hong Kong na-ekwughachi mbọ anyị na-ebe ọzọ iji nyere obodo aka ịkacha mara. Dịka ọmụmaatụ, na Great Britain, anyị na London na-arụ ọrụ maka 'Arc of Opportunity'. Ọ bụ ihe atụ nke Smart City nke mpaghara nzuzo na-arụ ọrụ na mmekorita ya na Londonlọ Ọrụ Dị Ukwuu London, ebe a na-arụ ọtụtụ atụmatụ smart obodo na-elekwasị anya na ike, ụgbọ njem na ụlọ.
Na Vienna, Austria, anyị na obodo Aspern na-arụ ọrụ na ngosipụta ụlọ nyocha ngosipụta ọnụnọ ụlọ nyocha Smart Cities na sistemụ maka obodo smart, na-elekwasị ike arụmọrụ na akụrụngwa smart na ịmalite usoro maka ike imeghari, njikwa grid. voltaji dị ala, nchekwa ike na njikwa ọgụgụ isi nke netwọkụ nkesa.
Gini mere i ji chee imeputa obodo smart dijital a?
Ọhụụ anyị maka Smart City Digital Center bụ iji mee ka mmepe obodo smart dị ngwa site na mmekọrịta na mmepe nka. MindSphere mebere, IoT igwe ojii Siemens bụ sistemụ arụmọrụ, a haziri ya ka ọ bụrụ ụlọ nyocha mepere emepe nke na-enyere R&D ụlọ, ike na agagharị. Site na imeziwanye njikọta IoT, igwe dijitalụ anyị chọrọ inyere ndị nwere aka aka ịmata adịghị ike nke obodo anyị na ịkwado ụlọ ọrụ iji gbasaa azụmahịa ha na digitization.
Anyị na-atụ anya na etiti ahụ na-akwalite onyinye ọdịnihu na Hong Kong iji kwado ikike mmepe nke obodo maara ihe. Maka nke a, etiti bidoro Mindsphere Academy iji nye ọzụzụ ma soro ndị Kọmịị na Ọzụzụ na - emekọrịta ihe iji nyere aka gboo mkpa ọrụ ma gbaa ndị sonyere na ọrụ a aka.
Kedu ihe bụ isi ọrụ dị na etiti a?
Ulo oru nleba anya anyi di iche-iche nke Smart City di iche-iche ichikota ihe omuma ohuru nke obodo site na mmekorita ndi obodo anyi dika ndi n’enye ihe, ulo akwukwo ha na ihe ndi ebido. Ebe a bu n’obi ime ka onye na - ejikọta ihe omuma banyere teknụzụ IoT dị elu, gbaa ndị ọrụ ume ka ha mepee data maka ngwa obodo ukwu, mepụta ozi maka echiche zuru oke banyere akụrụngwa obodo, ma nyochaa ngwa obodo. Ebumnuche kasịnụ bụ iwu obodo mara mma na Hong Kong ma melite ike ndụ na arụmọrụ obodo anyị.
Kedu mpaghara ị nwere ọganihu kachasị na digitization?
Anyị na-ahụ ọganihu na ngalaba, ike na ngaghari nke na-erite uru kachasị na digitization.
Buildlọ bụ nnukwu ndị na-eri ọkụ na obodo, na-eri 90% nke ọkụ eletrik na Hong Kong. Enwere ikike dị ukwuu iji melite arụmọrụ ike ụlọ ahụ, belata nsonaazụ ya na gburugburu ebe obibi, ma jiri amamihe jikwaa oghere ime ụlọ site na teknụzụ nwere ọgụgụ isi nwere ikike AI. Dịka ọmụmaatụ, sistemụ 'AI Chiller' anyị na-enye nleba anya ọnọdụ 24x7 nke osisi chiller, na-enye ndị otu ụlọ ọrụ ihe owuwu ozugbo iji bulie ọrụ ha na-aga n'ihu. Ihe atụ ọzọ bụ “ụlọ nwere ike ikwu okwu” nke na-enweghị ike ikwukọ maka usoro ike iji mepụta ihe ọkụkụ nke na-aza mkpa nke ụlọ na ndị bi na ha ma na-agba mbọ na-eji akụ ikike obodo bara uru. ụzọ oru oma ma dikwa ike.
N’obodo mepere emepe nke ndị mmadụ dịka Hong Kong, enwere nnukwu ike ịkwalite ihe ọhụụ iji me ka ndị njem wee nwee ahụmịhe njem na-enweghị nhịahụ. Novmepụta ihe ọhụrụ na V2X (eriri-ụgbọ) na-eme ka mkparịta ụka oge niile dị n'etiti ụgbọ ala na akụrụngwa na-akwado ngwa dị ka ụzọ nchịkwa nchịkwa nwere ọgụgụ isi iji jikwaa ọnọdụ okporo ụzọ dị mgbagwoju anya na ụzọ mbata nke obodo. Teknụzụ ndị dị otú ahụ mgbe etinyere ya n'ọtụtụ bụkwa isi ihe maka ịkwado ụgbọ ala nchebe na ntụkwasị obi nke obodo niile.
Gwa anyị maka njikọta n'etiti Bentley Systems na Siemens: Kedu otu mmekota nke a si enyere mpaghara akụrụngwa aka?
Siemens na Bentley Systems nwere akụkọ ihe mere eme nke ịgbakwunye ibe ibe ha site na ikikere teknụzụ nke ibe ha iji nye ihe ngwọta n'ọhịa nke ụlọ ọrụ dijitalụ. Njikọ a gara n'ihu n'ihu na 2016 iji nweta ohere ọhụụ na ụlọ ọrụ na akụrụngwa site na njikọta nke ụdị injinịa dijitalụ na atụmatụ itinye ego. N'ilekwasị anya na ejima dijitalụ na MindSphere leverage, njikọ aka ahụ na-eji usoro injin dijitalụ maka arụmọrụ anya na arụmọrụ nke akụrụngwa jikọtara ọnụ na-enyere ngwa ndị dị elu aka dị ka "Mmekọrịta dị ka Ọrụ" maka usoro ndụ bara uru. Nke a na-ebelata ụgwọ ọrụ usoro ndụ ọ bụla kemgbe njiri elu na imewe, mmejuputa ya, na arụmọrụ nwere ike nweta site na ịme anwansị na ejima dijitalụ yana mmejuputa amalite nanị mgbe ọ na-emezu atụmanya na nkọwa niile. Gburugburu data Mkpokọta Essential ejikọtara maka nke a na-enye ọhụụ nkwalite dijitalụ na -emepụta ejima dijitalụ zuru oke nke usoro ahụ na uru anụ ahụ. N'ime mmekorita ohuru, ndi otu abụọ weputara Plant View to Connect, Contextualize, Validate na Visualize Plant Data iji mepụta ejima dijitalụ maka ndị ọrụ iji chọpụta nghọta ọhụrụ. Na Hong Kong, obodo anyị dijitalụ mara mma na-eji Bentley na-enyocha isiokwu ndị yiri ya iji mepụta uru maka ndị ahịa ma mee ka mgbanwe nke obodo maara ihe.
Kedụ ihe ị pụtara na Njikọ Obodo Nmekọrịta?
Ngwọta Njikọ Obodo (CCS) ejikọtara na ntanetị nke Ihe, igwe ojii na teknụzụ njikọ iji kwado njikwa obodo mara mma ma mee ka ọhaneze nwee ohere. Site na data ndị natara na ngwaọrụ smart kpokọtara ma MindSphere kwadoo, usoro obodo ejikọtara na-ebugharị ọrụ obodo site na ime ka njikọ IoT na nchịkọta data na nyocha nke obodo. Mmụba nke ihe mmetụta IoT dị n'obodo ahụ nwere ike ikwe ka nchịkọta nke data gburugburu, gụnyere ìhè gburugburu, ụzọ okporo ụzọ, data gburugburu gụnyere ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, nrụgide, mkpọtụ, ọkwa nke ịma jijiji, na irighiri ihe kwụsịtụrụ. Enwere ike nyochaa data anakọtara site na ọgụgụ isi iji nye ozi ma ọ bụ ịkọ ọdịnihu maka nsogbu dị iche iche n'obodo ukwu. Nke a nwere ike iwepụta echiche ndị na - agbanwe maka ndị na - eme atụmatụ obodo iji lebara ihe ịma aka obodo anya dịka nchekwa ọha, njikwa akụ, ike ike, na mkpọchi okporo ụzọ.
Kedu otu Siemens si enyere aka wulite obodo nke ndị mmepe obodo mara ihe site na ilekwasị anya na agụmakwụkwọ?
E guzobere Siemens Smart City Onye Mmepụta Obodo (SSCDC) na Jenụwarị 24, 2019 dị ka ndọtị nke dijitalụ obodo obodo iji rụọ ọrụ na ịgbatị ike nke Mindsphere. SSCDC na-emekọrịta ndị mmekọ, ndị ọkachamara nka na ụzụ, SME, na mmalite n'ime mmepe obodo mara mma site na ịkekọrịta ihe ọmụma, echiche imekọ ihe ọnụ, ịkparịta ụka n'igwe na ohere mmekọrịta. O nwere ebumnuche 4 dị mkpa:
Mmụta: Na-enye ọzụzụ dị elu nke IoT, uloru mmekorita ya na ulo akwukwo nke mepere emepe iji kwado onyinye karia, ndi injinia, akwukwo na CXO na imeputa uzo dijitalụ di egwu.
Netkparịta ụka n':zọ: Mee netwọkụ ndị ọkachamara site na ibụ ndị nwere mmasị pụrụ iche na mmalite, SME na ọtụtụ ntanetị nwere ohere ịkparịta ụka n'ọmụmụ ihe dị iche iche.
Imepụta ihe: Leverage MindSphere dị ka ntanetị maka ntinye ọnụ na ndị nwere echiche iji gbanwee echiche ụlọ ọrụ n'ime ngwa ụwa n'ezie.
Mmekorita: ohere iji tufuo mbido mmalite na SMEs na njikọ zuru ụwa ọnụ nke mmalite na njikọ ọrụ iji mejupụta ndị otu na ihe ọmụma na itinye ego iji bulie ihe ngwọta na MindSphere.
Obodo ahụ na-akwalitekwa usoro njikọta ihe ọhụrụ siri ike maka ụlọ ọrụ iji guzogide ọgba aghara nke teknụzụ nke IoT kpatara, gbasaa azụmahịa ha, ma lebara ihe ịma aka dị mkpa nke obodo na-apụta. N'ihe na-erughị otu afọ, SSCDC nwere ihe karịrị ndị otu 120 nwere ihe omume obodo 13 sitere na ọrụ aka na IoT ruo Solbọchị Ngwọta MindSphere, na-emeghe ike nke IoT na iwepụta mkparịta ụka na ohere nke imekọ ihe.
Ozi ọ bụla ịchọrọ inye ndị ụlọ ọrụ na-ewu iwu / ndị ọrụ.
Digitization na-eweta mgbanwe na-akụda mmụọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ ihe egwu ma ọ bụrụ na eleghara ya anya, mana ohere ma ọ bụrụ na anakwere ya. N'ime ụlọ ọrụ ihe owuwu a na-agbagha site na ibelata arụpụta na ọnụego na-arịwanye elu, usoro ndụ niile nke oru ngo nwere ike irite uru na digitization.
Dịka ọmụmaatụ, ịme ozi banyere ozi ụlọ nwere ike ime ka ụlọ dị ka ihe niile ma bụrụ nke anụ ahụ, na owuwu na-amalite mgbe ejiri kwalite atụmatụ niile na atụmatụ niile. Enwere ike imeziwanye ihe a na MindSphere, nke na-enyere aka nnakọta data, nchịkọta na nyocha niile n'oge usoro owuwu ihe, mepee ohere ndị ọzọ lekwasịrị anya ejima dijitalụ nke ọrụ ahụ. Nke a na - eme ka njikọta nke teknụzụ dị ka mgbakwunye nwere ike inye aka na imepụta ihe eji arụ ụlọ site na ejima dijitalụ iji mee ka mmechi nke Modular Integrated Building (MiC) dịkwuo mma maka usoro a na-arụ ọrụ nke ọma.
Iji gbanwee usoro nlele na usoro asambodo, ugbu a ọ dị n'akwụkwọ, ihe ọhụụ na teknụzụ blockchain nwere ike ime ka njikwa na nlekọta nke oru dijitalụ, na-ahụ maka nghọta, iguzosi ike n'ezi ihe nke ndekọ, na imelite arụmọrụ. Digitization na-enye ohere dị ukwuu ma gbanwee ụzọ anyị si arụ ụlọ, arụkọ ọrụ, ma rụọ ọrụ, na-emeziwanye arụpụta ihe owuwu ma belata ụgwọ ọrụ ọrụ ngo, ebe na -emepụta abamuru na-adịru oge niile nke ụlọ ahụ. .
Siemens na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ iji wuo teknụzụ ndị nwere mbelata nke na-eme ka okike / mmezi nke obodo ndị nwere amamihe?
Siemens na-emeghe mgbe nile ka ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ rụọ ọrụ ma ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ.
Siemens abanyela aka na ncheta nke nghọta ma kọọ ọtụtụ njikọta na Hong Kong iji mee ka mmepe nke obodo amị ahụ ike bawanye, dịka ọmụmaatụ:
Smart City Consortium (SCC) - Na-ejikọ MindSphere na obodo amara nke Hong Kong iji gosipụta etu MindSphere nwere ike isi rụọ ọrụ dị ka ikpo okwu IoT nke obodo.
Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP): Ngwa imekọ ihe ọnụ na iwulite ngwọta obodo mara mma na IoT na nyocha data.
CLP: Mepụta ọrụ ndị na-anya ụgbọelu maka ike ọkụ, obodo maara ihe, ọgbọ na-eweta ike na ikuku.
MTR: Mepụta usoro dijitalụ iji bulie ọrụ okporo ụzọ site na nyocha
VTC: Zụlite nkà nke ọgbọ na-abịanụ iji hụ na nkwado nke usoro ihe ọhụrụ dị ọhụrụ ma weta echiche ọhụụ maka ihe ọhụụ ga-eme n'ọdịnihu.
Na Jenụwarị nke afọ a, Siemens sonyekwa na Mmemme Scalerater GreaterBayX, ntinye aka na ndị isi mmalite na ụlọ ọrụ dịka Greater Bay Ventures, HSBC, na Microsoft iji nyere ndị gụsịrị akwụkwọ aka ịghọta ọhụụ obodo ha ma jiri ohere ha na-eto na ngalaba mmiri anyị bi na mepere emepe.
Previous Post«Previous Ejimajima Digital - Nkà ihe ọmụma maka mgbanwe ọgbara ọhụrụ
Next Post Geofumadas - na ọnọdụ dị ugbu a dijitalụOsote "